Health Sarokar | माइग्रेनको दुखाई कम गर्न रङ्गिन बत्तीको अनौठो प्रयोग !
माइग्रेनको दुखाई कम गर्न रङ्गिन बत्तीको अनौठो प्रयोग !
केही वर्ष यता अराईजोना विश्वविद्यालयले रङ्गिन बत्तीको प्रयोग गरेर दुखाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। लामो समय दुखाइको पिडा खपिरहेका मानिसको लागि यो खुसीको खबर बन्न सक्दछ।
दुखाई कम गर्न मानिसले अनेकौँ औषधिको प्रयोग गरिरहेका बेलामा औषधिको प्रयोग बिना नै धेरै प्रकारको दुखाई कम गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। माइग्रेनको दुखाई देखि फाइब्रोमायल्जियाको दुखाई सम्म कम हुने अराईजोना विश्वविद्यालयमा चलिरहेका अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
डा. मोहब इब्राहिम यो अनौठो प्रयोगका मुख्य अनुसन्धानकर्ता हुन्। अराईजोना विश्वविद्यालयका अनेस्थेसिया र फर्माकोलोजी विभागका सहप्राध्यापक डा. इब्राहिमका अनुसार बिरामीहरूले केवल हरियो बत्तीको अगाडि दैनिक केही समय बस्दा उनीहरूमा देखिने गरेको दुखाइको समस्यामा औसत ६० प्रतिशत कमी आएको देखिएको छ।
हो दुखाई पूर्ण रूपमा नै हराउने होइन तर बिरामीका लागि यसले धेरै नै सजिलो भएको उनको भनाइ छ। माइग्रेनका बिरामीहरूमा गरिएको अनुसन्धानले माथि भनिएजस्तै दुखाइमा औसत ६० प्रतिशत कमी आएको देखिएको छ र महिनामा पहिले २० चोटि सम्म माइग्रेनले सताउने बिरामीहरूमा अहिले महिनाको केवल ६ चोटि मात्र दुखाइको अनुभूति गरेको देखियो। अहिले उनी अन्य किसिमका दुखाइमा हरियो बत्तीको प्रयोग गरिरहेका छन्। नयाँ अनुसन्धानको विषय बनेकोको एड्समा हुने दुखाई यानि न्यूरल्जिया।
यस अघि उनले गरेको अनुसन्धानले प्रयोगशालाका मुसामा दुखाई कम गर्न हरियो र निलो बत्ती सफल भएको देखिएको थियो।
बिरामीलाई हरियो बत्ती अगाडि बसिरहन सजिलो नहुने हुँदा अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले चस्मा लगाउने मानिसका लागि हरियो सिसाको प्रयोगमा पनि अनुसन्धान गर्दै छन्। तपाईँलाई पनि यदि माइग्रेनको समस्या छ वा अन्य कुनै किसिमको दुखाइको, तपाईँले धेरै समय बिताउने कोठामा हरियो बत्तीको प्रयोग गरेर हेर्ने कि ? तर याद राख्नुहोस् यहाँहरूले यो विधि अपनाउँदैमा पहिले देखि खाई रहेको औषधि नै खान भने छोड्नु हुँदैन। आखिर यो तरिका अपनाउन खासै गाह्रो पनि छैन र यसको प्रतिकूल असर पनि छैन। त्यसैले पनि यँहाहरुले पनि दुखाइको पिडा कम गर्न यो तरिका अपनाई हेर्ने पो हो कि ?
के हो त माइग्रेन ?
माइग्रेन एक प्रकारको टाउको दुखाई हो । यसको कारणले टाउको दुख्यो भने त्यसलाई घटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
यसको कारण रोकिई रोकिई टाउको दुख्छ र धेरै कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छ । यो दुख्नुको कारण न्युरोलोजिकल समस्या हो । शरीरले गर्ने न्युरोट्रान्समिटरको उत्पादन पनि माइग्रेनको कारण हुन सक्छ ।‍
माइग्रेन भएको समयमा मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार बढ्छ, जसको कारण चर्को गरी टाउको दुख्ने गर्छ । यस्तो दुखाई गर्मीका झन् बढ्ने डाक्टरहरू बताउँछन् । गर्मीमा तापक्रम बढ्ने र घामको तेज किरणको कारण माइग्रेनको दुखाई बढ्छ ।